iWatermark Pro ye-Mac
iWatermark Pro ye-Mac - # 1 Watermark App yokukhusela iiFoto
Asanda: 12 / 14 / 20
Iyafuna: IMac 10.9-12.0 +
IWatermark Pro - App yeWatch Watermarking yeMac
Uhlelo lokusebenza lweWatermark ukukhusela iifoto kunye nomsebenzi wobugcisa. Iimpawu zamanzi zinokunceda ukuthintela iifoto owabelana ngazo nge-Facebook, i-Instagram, njl. Sukukrazulwa, nokuba iwatchjit encinci encinci inokukunceda ukhusele ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Eyona watermark kunye ne-batch watermarking app. Yenza ngokulula ilogo, i-bitmap, i-vector, ikhowudi ye-QR, umgca, i-steganographic kunye nezinye iintlobo ezi-5 ze-watermark. phinda wenze ubungakanani kwakhona, unike igama kwakhona, wenze iithonjana, kunye nokulawula imethadatha. Iimpawu ezininzi. Inkqubo ye-watermark esetyenziswa ngabaqalayo, iiprosesa kunye neenkampani. Iinguqulelo zeMac, Windows, iOS kwaye Android.
"Eyona app isemagqabini endiyijongileyo yiWatermark Pro yiPlum Amazing." UThomas Bolt, isoftwareHow
"Xa kuziwa ekongezeni ii-watermark kwiifoto zakho, akukho sixhobo sibhetele kuneWatermark Pro yeMac." I-4.5 kwiigundane ezi-5, iMacworld
iWatermark Pro ye-Mac - # 1 Watermark App yokukhusela ubungakanani beefoto
iWatermark lilizwe leNombolo 1 yesicelo se-watermarking yedijithali kwiMac, Windows, iPhone, iPad kunye ne-Android. I-Stylisily watermark Ilungelo lokushicilela kwifoto kwimizuzwana. I-iWatermark yenziwa kwaye yenzelwe iifoto.
iWatermark Pro zeMac kunye neeWindows zinokutshintshiselana ii-watermark zangaphandle. Njengesicelo esime bodwa sisebenza kunye neLightroom, Photoshop, Picasa, ACDSee, Cumulus, Portfolio, PhotoStation, Xee, iView, PhotoMechanic nabanye abahleli bezithombe. I-iWatermark yeyona software ibalaseleyo yokujonga amanzi kuwo onke amaqonga kunye nokudityaniswa nezinye isoftware.
iWatermark Kwi-iPhone / i-iPad kunye ne-Android ziiapps zomthonyama ezisebenza ngokuthe ngqo kwifowuni / kwiipilisi zekhamera.iWatermark sisixhobo esibalulekileyo kuye nabani na onekhamera yedijithali, iingcali kunye nabaqalayo.
Skrolela ezantsi kwaye ucofe amakhonkco asekhohlo ngolwazi oluthe kratya malunga ne-iWatermark. Fumanisa ukuba kutheni ilawensarking licebo elilungileyo. Funda malunga neempawu kuhlobo ngalunye.
“Ubuhle beWatermark ngumdibaniso wayo wokusebenzisa ngokulula kunye nokusebenza. Ukuba ukhe wafuna ukuzama i-watermarking, okanye ukuba sele uyenzile kwaye uyayamkela indlela yokwenza ngokukhawuleza nangokulula, iWatermark sisixhobo esingabizi kwaye sinomtsalane. Andikasiboni isisombululo esingcono kuneWatermark yePlum Amazing. ” - UDan Frakes, IMacworld, ii-4.5 ze-5 zeempuku
ebonakalayo Ifoto &
yokuzonwabisa Nawuphi na umbhalo obandakanya imethadatha eneesetingi zokutshintsha ifonti, ubungakanani, umbala, ujikelezo, njl.
yokuzonwabisa Isicatshulwa kwindlela egobile.
yokuzonwabisa Umzobo uhlala ubonakala elubala .png ifayile yelungelo lakho, uphawu, uphawu lwelungelo lokushicilela, njl njl Ukungenisa.
yokuzonwabisa Sebenzisa ngaphezulu kwe-5000 eyakhelwe-ngaphakathi kwi-vector (SVG's) ukubonisa iigrafiki ezigqibeleleyo nakweyiphi na ubungakanani.
yokuzonwabisa Umda wevektha onokuthi ukolulwe ujikeleze umfanekiso kwaye ubeke ngendlela efanelekileyo kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo zokuseta.
yokuzonwabisa Uhlobo lwebhakhowudi enolwazi olufana ne-imeyile okanye i-url ekubhaleni oko.
yokuzonwabisa Sayina, ungenise okanye uskene utyikityo lwakho kwitermark ukuze utyobele indalo yakho.
Ezingabonakaliyo Ifoto &
yokuzonwabisa Ukongeza ulwazi (njenge-imeyile yakho okanye i-url) kwi-IPTC okanye i-XMP eyinxalenye yefayile yeefoto.
yokuzonwabisa I-StegoMark yindlela yethu yobunini be-steganographic yokungenisa ulwazi olufana ne-imeyile yakho okanye i-url kwidatha yemifanekiso ngokwayo.
ebonakalayo Photo Guqula ubungakanani befoto. Iiluncedo ngokukhethekileyo kwi-Instagram
ebonakalayo Photo Iifilitha ezininzi ezinokusetyenziselwa ukuthoba imbonakalo yeefoto.
Iinketho zokuthumela ngaphandle
yokuzonwabisa Khetha iindlela zokuthumela ngaphandle zeefomathi, i-GPS kunye nemethadatha
Okukwintsusa: Ukuba ujonga indlela yokubukela izinto zakho zemifanekiso kwiwebhu, sicebisa iWatermark +. ”- UNate Adcock, iPhoneLife Magazine 1/22/15
Ii-Native zokusebenza ze-iPhone / i-iPad, iMac, yeWindows kunye ne-Android
Iindidi ezili-6 zeewatchark
Isicatshulwa, umzobo, i-QR, utyikityo, imethadatha kunye ne-steganographic.
Isebenza ngazo zonke iikhamera, Nikon, Canon, Sony, Smartphones, njl.
Inkqubo ye-watermark eyodwa okanye yebatch imifanekiso emininzi ngaxeshanye.
Yenza iitermark usebenzisa i-metadata efana nombhali, copyright kunye namagama aphambili.
Yongeza i-watermark yethu engabonakaliyo yee-watermark ukushumeka ulwazi kwifoto
I-QR Code Watermark
Yenza iikhowudi ze-QR ze-app nge-url, i-imeyile okanye olunye ulwazi oza kulusebenzisa njengeewatchark.
Yenza iitermark zetekisi ngefonti ezahlukeneyo, ubungakanani, imibala, ii-angles, njl.
Iimpawu zamanzi oMzobo
Yenza i-graphic okanye i-logo watermark zisebenzisa iifayile ezibonakalayo ezibonakalayo.
Gcina iiwatchatch zakho zonke zikwindawo enye kunye nawe kunye neshishini lakho
Sebenzisa utyikityo lwakho njenge watermark njengabapeyinti abadumileyo
Amanzi amaninzi afanayo ngaxeshanye
Khetha kwaye usebenzise ii-watermark ezininzi ezahlukeneyo kwifoto (s).
Iwermark isebenzisa ilungelo lakho lobunini, igama, url, imeyile, njl njl. Kwiifoto.
Isixhobo sokuhambisa amanzi
Khetha ibenye okanye inani leenqwelwana ezazivela kwidrowa.
Idatha yendawo ye-GPS
Gcina okanye ususe imethadata ye-GPS ngasese
Yenza ubungakanani kwakhona kwiifoto
Kuzo zombini iiMac kunye neeWin eziguquguqulweyo iifoto zinokuphinda zibekeke ubungakanani kwakhona.
Sebenzisa i-GPU, i-CPU kunye nokuqhubekeka okuhambelanayo ekubumbeni ngokukhawuleza.
Ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle
IJPEG, iPNG, iTIFF kunye neRAW
Sebenzisa iindlela ezininzi ezahlukeneyo zokukhangela ukukhusela iifoto zakho
I-Watermark ikhumbuza abantu ukuba ifoto yinto ethile yokuqonda
kunye neeaphulelo ezinje ngeAdobe Lightroom, iifoto, ukutyabeka kunye nazo zonke ezinye izikhangeli zeefoto
Amathumbu aphuma ngaphandle
Ukukhuphela kwelinye ilizwe, ukwenza isipele kunye nokwabelana ngewatermark zakho.
Iziphumo ezizodwa zokwenza ngaphambi nasemva kokulungiswa kweefoto
I-watermark ngalo naluphi na ulwimi. Yenzelwe iilwimi ezininzi
Ukulawula indawo ekuyo
Iimpawu zamanzi zinokutshintshwa ngeephikseli.
Kwindawo enye kwiibhloko zeefoto zendlela eyahlukileyo kunye nobukhulu.
Yabelana nge-imeyile, i-Facebook, iTV kunye nezinye iisayithi zentlalo yoluntu.
Cwangcisa ukuqhula komsebenzi wokuphinda ubethe iibhetri zeefoto ngokuzenzekelayo.
I-watermark yonke iifolda zemifanekiso ngaxeshanye.
Sebenzisa ii-watermark ezininzi kwangaxeshanye (Pro kuphela) .Import / Export / Ukwabelana nge watermark ozenzileyo (Pro yodwa).
Yenza yonke imifanekiso yakho ilingane
Yenza iifoto zemifanekiso yakho ebunjiweyo.Usebenzisa isicatshulwa, i-TIFF okanye iilogo ze-PNG zeelayibrari zakho.
Seta ukucaca kwewindows yakho.
Jikelezisa, ubambe, kwaye ubeke i-watermark yakho, naphi na emfanekisweni wakho.
Sebenzisa iziphumo ezizodwa ezinjenge-aqua, isithunzi kunye / okanye i-emboss kwiwatch yakho.
Gcina imethadatha ebanjiswe kunye nomfanekiso, njenge-ExIF, i-IPTC kunye ne-XMP.Input kunye nokuKhangela umfanekiso wakho obonwe ziifomati ezahlukeneyo zemifanekiso.
Ixabiso eliphantsi, elisebenza ngakumbi, elikhawulezayo nelilula kakhulu ukusebenzisa iFotoShop. I-iWatermark yenzelwe ngokukodwa ukubonwa kwe-watermarking.
Yenza kwaye usebenzise iikhowudi zeQR (njengeebarkhowudi) njengeewermark (iiPro kunye ne-iPhone / i-iPad kuphela) .Sebenzisa eyakhelwe kwii-watermark zeCreative Commons (Pro kuphela).
Cwangcisa i-watermark yendawo ngo-x, y oqinisekisa ukuba i-watermark yakho ivela kwindawo enye kungakhathaliseki ubungakanani okanye isisombululo semifanekiso.
Zininzi izinto ekufuneka zidwelisiwe. Khuphela ukuze uzame mahala.
Ukuba wabelana ngefoto emangalisayo oyithathileyo nge-imeyile, i-Facebook, i-Instagram, iTwitter, njl.njl. Kungenzeka kakhulu ukuba ziye kwintsholongwane emva koko ziphaphazele ziphume kwihlabathi liphela ngaphandle kolawulo lwakho kwaye ngaphandle konxibelelwano kuwe njengomdali. Kodwa sayina ngokwamanani umsebenzi / iifoto / imifanekiso / umsebenzi wobugcisa usebenzisa iWatermark enegama lakho, i-imeyile okanye i-url kwaye iifoto zakho zinonxibelelwano olubonakalayo nolusemthethweni kuwe naphi na apho baya khona.
Yakha uphawu lwenkampani yakho, ngokwenza uphawu lwenkampani kuyo yonke imifanekiso.
Kuphephe ukumangaliswa kokubona umsebenzi wakho wobugcisa kwenye indawo kwiwebhu okanye kwintengiso.
Kulumkele ukungavisisani kunye nentloko kunye nababhali ababanga ukuba abazi ukuba uyidalile.
Kuphephe ukumangalela ngeendleko ezinokubandakanyeka emva koko.
Kulumkele ukuxabana kwepropathi enengqondo.
Iifoto zentsholongwane ezisetyenziswe ngokungekho mthethweni
Kutheni iWatermark ingumbono olungileyo. Jonga ezi ndaba zeefoto ezisetyenziswa ngaphandle kwemvume. Ivula kwithebhu entsha yesikhangeli.
Uninzi lwee-watermark zinokwenza i-watermark yokubhaliweyo kwaye ezimbalwa zibe ne-watermark yemifanekiso. IWatermark iyithatha kakhulu kwaye ineentlobo ezili-12 zeewatermark. Uhlobo ngalunye lusebenzela injongo eyahlukileyo.
Iyabonakala vs ayibonakali
Ezinye iitermark ziyabonakala kwaye ezinye azibonakali. Zombini zisebenza ngeenjongo ezahlukeneyo.
I-watermark ebonakalayo kulapho uyibeka khona ilogo yakho okanye utyikityo kumfanekiso wakho.
I-watermark engabonakaliyo ifihliwe kuwo wonke umfanekiso, ngaphakathi kwekhowudi eyivelisayo, yipateni ebonakalayo eyichonga njengomsebenzi wakho wobugcisa.
Obu buchule buhlala bubiza kakhulu kwaye bunezithintelo ezibini eziphambili. Iphantse ihlise umgangatho womfanekiso, kwaye inokukhuthaza abantu ukuba bakope umsebenzi wakho kuba kubonakala ngathi awunalungelo lokushicilela. Kuzo zombini iimeko, umyili wemizobo onobuchule ozimisele ukusebenzisa umfanekiso wakho, unokufumana iindlela zokususa i-watermark yakho ngexabiso ukuya kumgangatho womfanekiso.
Sivakalelwa kukuba xa ubona ii-watermark imifanekiso isebenzisa iinjongo ezi-2.
1. Yenza abantu bayazi ukuba le ayisifoto nje efihlakeleyo efumanekayo ngalo naluphi na usetyenziso.
2. Inokuqulatha ulwazi lwakho. Njengegama, i-imeyile, indawo, nantoni na ofuna ukuyibonisa ukuze abantu banxibelelane nawe.
I-iWatermark yiNkxaso-mali yaseburhulumenteni:
Ukuthelekisa iWatermark Pro okanye iMac / Win kunye neWatermark + ye-iPhone / iPad / Android
Zonke iinguqulelo zeWatermark zibhalwe ngolwimi lwasekhaya lwale OS. IMac kunye neWin zineempawu ezifanayo kuba zombini ziidesktop. Iinguqulelo ezi-2 zeOs OS kunye ne-Android zineempawu ezifanayo.
Iimpawu ze-iWatermark Kwi-iOS nakwi-Android KwiMac nakwiWindows
umxokozelo iOS Android IMac Windows
Ubuninzi beefoto Umda (usekwe kwimemori) Umda (usekwe kwimemori)
Iimpawu zamanzi ngaxeshanye Unlimited Unlimited
isantya Ngama-64 bit (ngokukhawuleza kakhulu) Ngama-64 bit (Ngokukhawuleza)
Ukusebenza kweParadise Aware Intambo ezininzi zisebenzisa i-CPU / GPU ezininzi Ukusetyenziswa kwemisonto emininzi ii-CPU / ze-GPU ezininzi
I-AppleScriptable (Mac kuphela) - Ewe, kubandakanya izikripthi kunye nemenyu ye-script
Ulwandiso lweShell yeWin Explorer - Cofa ekunene ukuze usebenzise iiwatchark ngqo.
Iiprofayili zombala - Sebenzisa iiprofayili ezikhoyo nezikhethwayo
Ifolda yokukhupha Sebenzisa izandiso zokuThumela ngaphandle useto lwemveliso eneenkcukacha
Iindidi zefayile zoPhumo jpg I-jpg, i-png, iirhafu, i-psd, i-bmp, i-jpeg 2000, clipb
Ngenisa iiVelimitha Kwi-iOS, Ukuza kwi-Android Ewe, ukusuka kuMac okanye kwiWin version
Amathumbu aphuma ngaphandle Kwi-iOS, Ukuza kwi-Android Gcina kwindawo yokugcina izinto okanye wabelane ngeMac okanye Win version
Hlela ii-Watermark Advanced (amanqaku amaninzi amaninzi) Advanced (amanqaku amaninzi amaninzi)
Isixhobo sokuhambisa amanzi Hlela, hlela, ukujonga kwangaphambili Hlela, uhlele, utshixe, uhlole kuqala, ungene
Yenza i-Watermark Droplet - Yenza i-watermarking lokusebenza enikezelweyo
IMetadata (XMP, IPTC) IPTC I-XMP kunye ne-IPTC eyandisiweyo
Yongeza / Susa iMetadata IPTC / XMP / GPS IPTC / XMP / GPS
Shumeka iMetadata eWatermark IPTC / XMP / GPS IPTC / XMP / GPS
Iimpawu zeMetadata njengemanzi I-IPTC, iTage, iGalelo leFayile, Exif, GPS I-IPTC, iTage, iGalelo leFayile, Exif, GPS
I ziphumo abaninzi abaninzi
Indawo yeWatermark Cwangcisa ngokutsala kunye nokuphina. Cwangcisa ngokutsala kunye nokuphina.
Isikali seWatermark Okwenziweyo, ethe tye kwaye nkqo Okwenziweyo, ethe tye kwaye nkqo
Ifomathi yeWitermark yokuBhala Ifonti, ubungakanani, umbala, ukujikeleza, ukucaca, isithunzi, umda Ifonti, ubungakanani, umbala, ukujikeleza, ukucaca, isithunzi, umda
imvelaphi umbala, opacity, ubungakanani, umda, isithunzi, ukujikeleza umbala, opacity, ubungakanani, umda, isithunzi, ukujikeleza
Nceda Kwi-Intanethi, kwimixholo kunye neenkcukacha Kwi-Intanethi, kwimixholo kunye neenkcukacha
Iikhowudi zeQR njengeeWermark Yenza iikhowudi zeQR zisebenzisa iiwatchark Yenza iikhowudi zeQR zisebenzisa iiwatchark
Iimpawu zeCreative Commons Watermark - Yongeza ngokulula nayiphi na i-watermark
UkuKhangela okuKhawulezayo - Ibonisa ulwazi lwangaphandle lwewatch
Isebenza ngazo zonke iikhrawuza zeZithombe ewe ewe
iPhoto plugin - Iwermark ngqo kwi-iPhoto
Price Mahala, $ 1.99 kunye $ 3.99 iinguqulelo iTunes / Google Play Shareware
"IWatermark Pro yeyona software iphambili yokujonga izinto endizenzileyo, kwaye inezinto ezininzi endingakhange ndizifumane kuyo nayiphi na enye inkqubo." - Esona Software siBalaseleyo seWermarking 2018-UThomas Boldt
i-iPhone / i-iPad / i-iOS iWatermark +
I-iPhone / i-iPad / i-iOS yeWatermark. Okungakumbi emva koko kuhlolwe ngeenkwenkwezi ezili-1500 kwivenkile ye-iTunes.
Inguqulelo yeMac yeWatermark Pro
U-7/15/16 Uhlolisiso olwenziwe yiGIGA ngesiJamani
Isihlomelo sophononongo kwiTumblr
“Uneefoto? Beka i-watermark nganye nganye ukuze ubanga ilungelo lakho lokushicilela ”-UJeffrey Mincer, IBohemian Boomer
Imagazini yase-Italiya IsilaydiToMac
Uphononongo lweSMMUG lweWatermark Pro nguL. Davenport
Uphononongo olunzulu kakhulu eSweden lweWatermark Pro. UHenning Wurst. Funda yonke ibakala
"Sisicelo esifanelekileyo injongo yaso ephambili, ukudibanisa i-watermark ebonakalayo kwimifanekiso yakho yedijithali, kwaye uyawenza lula lo msebenzi kunye nezinye izinto ezongezelelekileyo ukwenza ubomi bakho bube lula."
UChris Dudar, I-ATPM
Funda yonke ibakala
"Ukuba ufuna ukongeza ii-watermark kwimifanekiso emininzi, iWatermark ibonelela ngebhanti yakho enkulu. Ayiphumeleli nje ngokuthandekayo kwimisebenzi yayo ephambili, kodwa yongeza nezinye izinto ezixabisekileyo zokugcina ixesha kwiphakheji. ”
UJay Nelson, IMacworld, ii-4.5 ze-5 zeempuku.
“Ubuhle beWatermark ngumdibaniso wayo wokusebenzisa ngokulula kunye nokusebenza. Ukuba ukhe wafuna ukuzama i-watermarking, okanye ukuba sele uyenzile kwaye uyayamkela indlela yokwenza ngokukhawuleza nangokulula, iWatermark sisixhobo esingabizi kwaye sinomtsalane. Andikasiboni isisombululo esingcono kuneWatermark yeSoftware yeScript. ”
UDan Frakes, IMacworld
Isoftware yelungelo lokushicilela elikhusela enye okanye itoni
"Le mveliso ijongeka lula kwimidlalo inezinto ezininzi ezikhoyo kwaye ixhasa phantse lonke uhlobo lwefayile enokubakho. Isimo esibonakalayo esilula kakhulu, esicocekileyo, esirhuqayo kunye nesitshixo sisebenza kakuhle kwaye sifuna nje izilungiso ezimbalwa zokhetho ukubeka uphawu lwakho emsebenzini wakho. Ukongeza, isoftware ixhasa iFayile yokuTshintsha kweMifanekiso (i-EXIF) kunye neKhowudi yoThintelo loNxibelelwano lwaMazwe ngaMazwe (IPTC).
Kukho ezinye izinto zokwabelana ngewallarking phaya, kodwa akukho nanye ebanzi kwaye inika inkxaso ngefomathi ye-IPTC. ”
UDaniel M. Mpuma, IMagazini yoyilo lweMac, Inqanaba:
“Ungayikhusela njani imifanekiso yakho? IPlum emangalisayo inexabiso eliphantsi ($ 20) kunye nesisombululo esilula: iWatermark. Yimpepho oyisebenzisayo. Tsala nje umfanekiso omnye okanye ifolda ezele yimifanekiso kwiscreen se-IWatermark ukuyichaza ukuba yeyiphi imifanekiso kwi-watermark, emva koko ucacise isicatshulwa se-watermark, njengo "© 2004 Dave Johnson. Apha kulapho le nkqubo ilunge ngokwenene: Ungakhankanya umfanekiso wew watermark endaweni yokubhaliweyo. Oko kuthetha ukuba unokubeka umfanekiso omncinci wakho kwikona yomfanekiso ukuba uyafuna. Emva koko cwangcisa indawo ekubukelwa kuyo njengekona okanye iziko lesakhelo – kwaye mayikrazuke. ”
UDave Johnson, Kwihlabathi lePC
Ukuhlolwa kweendaba zeMacsimum kuyinike i-9 kwezili-10 iinkwenkwezi.
I-PDF yeNqaku leMagazini yeKhamera yeDijithali
Ukuthelekiswa kweWermarking ebonakalayo (iWatermark) kunye engabonakaliyo (DigiMark)
I-Cnet Khuphela iigundwane ezi-5
"Omnye ucinga ukuba ndiyayithanda imveliso yakho kukuba ukubekwa kwewatch kusekwe kwipesenti yecala lomfanekiso, hayi inani elithile leepekseli. Whey ibalulekile loo nto? Ndidubula ngekhamera ye-24.5MP kunye neekhamera ezili-12MP. Ukuba ndifuna i-watermark yam kufuphi nomzantsi womfanekiso kunye nezinye iimveliso kufuneka ndibaxelele ukuba zingaphi iipekseli. Ukuba ndisebenza ngomfanekiso we-24.5MP inani leepekseli ndifuna ukuba umfanekiso ungabikho ezantsi uya kwahluka ngokuthelekiswa nomfanekiso we-12MP. Usetyenziso lwakho lusebenzisa% ubungakanani. Ndingakuqhuba usetyenziso kwiifoto ezimbini ezahlukileyo kakhulu kwaye ukubekwa kwelogo kuya kuhlala kunjalo. Ndicinga ukuba yindawo efanelekileyo yokuthengisa. ”
Scott Baldwin Scottbaldwinphotography.com
"Njengomfoti we-surf osebenza ngokuzama ukungena kwimifanekiso yam epapashiweyo, iWatermark ibeyeyona nto ibalaseleyo eyi- $ 20 endakha ndayisebenzisa! Wonke umntu ufuna ukuba uthumele iifoto nge-imeyile kuye kodwa bekuchithe ixesha elininzi ukongeza ii-watermark ngesandla ukulungelelanisa iifomathi ezithe nkqo nezithe tye. Ndizamile ukusebenzisa i-Photoshop Elements batch processing. Kunzima kakhulu ukuyenza kwiPS5. Le nkqubo indigcinele ixesha elininzi lokujonga iifoto ngokukhawuleza ndize ndizithumele kubapapashi abohlukeneyo. ”
UDiane Edmonds -IyakhoWavePics.com
"Ndiyichithe iminyaka ndizama isoftware eyahlukeneyo ukuba indenze ndibone imifanekiso yam, ndiyifumene neyakho emva kweentsuku zokuzama iintlobo ezahlukeneyo kodwa eyakho kukuthandabuza ngokulula kunye neyona nto ibiza kakhulu endiyifumanayo, enkosi ngemveliso ebalaseleyo, iklasi ephezulu "
UPeter Kearns - www.pfphotography.co.uk
Kudala ndisebenzisa iWatermark kwaye ndiyayithanda. Kunyaka ophelileyo ndilahlekelwe yintengiso eninzi, ngenxa yeentsapho ezikhuphela iifoto ezinobungakanani kwindawo yam. Kulo nyaka bendihlala ndisebenzisa iWatermark kwaye ukuthengisa kwam kunyukile. Abantu abafuni ukubona ulwazi lwe-copyright kanye embindini womfanekiso. Yimveliso elungileyo, ixabiso elikhulu kwaye yeyona nto ilula ukuyisebenzisa. Enkosi ngokundinceda ndikhusele imveliso yam! Luxolo, ”
Chris, Ukufota kwidijithali yesenzo
Inkqubo yakho ibe luncedo nje kum. Ndihlala ndibeka umtshato wam, umsitho kunye nokufota ngemifanekiso kwiitikopix.com. Kuyanceda ukumisa ukusetyenziswa okungagunyaziswanga komsebenzi wethu kwaye ndiqinisekile ndiyabulela ngaloo nto. Sakuvuyela ukubhatala le nkqubo. ”
UJon Wright, Uyilo lweJ & K! - http://www.artbyjon.com
“Ndidwelisa izindlu ezikwi-craigslist yerenti ndaza ndaqweqwedisa eminye imifanekiso yam PHAMBI kokuba ndithenge iWatermark. Ngoku abakhohlisi bakhetha enye into ekujoliswe kuyo kuba iwebhsayithi yam iplastwe efotweni! ”
Ifoto yefoto (Ifuna ixesha elikhawulezileyo)
I-PICT (iMacintosh Yodwa)
BMP (Windows Kuphela)
Iifomati ezingakumbi ezixhaswayo ngeXesha elikhawulezileyo. Ixesha elikhawulezileyo lifakwe ngaphambili kuzo zonke iiMacs eziqhuba i-OS X, kwaye simahla ukukhuphela kuzo zombini i-PC kunye neMac.
⁃ I-Min OS yi-10.8 okanye kamva… kubandakanya iBig Sur 11.0
Iindlela ezongeziweyo zokongeza umfanekiso kumhleli wewindows.
--- Tsala ithontsi lomfanekiso okanye ilogo equleni
--- Okanye sebenzisa iqhosha 'khetha' ukukhetha umfanekiso njengangaphambili.
--- Okanye sebenzisa cmd-G ukukhetha ifayile yomfanekiso
Indawo ezihlaziyiweyo zesiNgesi
Ukuphazamiseka okulungisiweyo kwi-Big Sur 11.0
⁃ Susa idrowa- iCloud imenyu
Ifayile e-Fixed-> entsha-icon yomgca we-X.
Ukuqhekeka okulungisiweyo kwimibala ethile ye-watermark engekho.
CheckItshekhi eyongeziweyo yokulahleka kwethala leencwadi leVector ~ / imifanekiso / iWatermark Vectors Clipart. Iya kuphinda ivelise kwakhona ukuba ilahlekile kwifolda yomfanekiso.
⁃ Ukulungiswa kwengozi xa uhlela okanye usebenzisa iGraphics yeNqaku ngokuchaza ukutshintsha kombala.
Ukucoca ilayibrari ukulungiselela inkxaso yeApple Silcon
Ifomathi yeWebP ayixhaswanga
Icebo lokucoca ulwelo kunye negalelo alichazi ifayile yomfanekiso engafundekiyo (.WebP njl.) Kwilog ayifundeki.
-ihlaziyelwe ukuxhasa ukubuyela kwi-mac os 10.9
-Iengcebiso zesixhobo esongeziweyo kwimifanekiso yokuhlela (ii icon ezimbini ezantsi ngasekunene) zomfanekiso olandelayo kwaye Guqula umbala wangasemva
Isicatshulwa esimiyo esisigxina esingafundekiyo kwindlela emnyama
- Umcimbi osisigxina kunye nedatha ye-IPTC engagcinwanga i-metadata yokufaka ibingakhutshwa (ixelwe ngumsebenzisi u-Walter Frieser).
- Umcimbi osisigxina kunye nomfanekiso woku-1 wokungasebenzisi useto loluleko.
-ukulungisa umba wokuphulukana
- Ukuhlaziywa kwekhowudi encinci kuluntu
-izilungiso zesilumkiso somqambi omtsha kwi-xcode entsha
-Lungiswe umbandela othile weMo yeNdlela emnyama nge-UI.
-Isuswe iW * Inkxaso yefu.
- Imida ehleliweyo kunye nemizobo ye-vector ebonisa .DS_Store kwi clipart yefestile
-I-bug ehleliweyo kwi-UI apho isicatshulwa sasinokucofa khona.
-Ukufunda okuStegomark okuqhekekileyo kwi-v2.5.0 ukuya ku-2.5.2. Nayo nayiphi na i-stegomark eyenziwe ngezo nguqulo ayizukufundwa yenye i-OS okanye ezinye iinguqulelo.
-Ukuhlaziya ukuphuculwa kwefayile yelayisensi yendawo entsha.
-Ibug elungisiweyo ngothungelwano xa kungekho watermark emiselweyo ekhethwe emva kokusetha kwakhona.
- indawo yasekhaya
-hlaziya i-URL kwimenyu yoncedo kwaye? iqhosha kwiscreen ngasinye kwisakhiwo esitsha sewebhusayithi
-umphathi we-watermark ngoku ufumaneka kwi-exif / iptc tab
-W • Ifu - Iphasiwedi ekhohliwe. Akukho myalezo ubonisiweyo ukuba akukho imeyile ingenisiweyo.
-Ukutshintsha ubungakanani beetemplate zilungiselelwe izinto ze-ios submenu. Ikhowudi itshintshiwe ukuba ingabinamdla kwimeko.
-Khangela uhlaziyo-ukucoca amanqaku okukhupha ukuze iilayini zomgca woku-1 zihambelane neminye imigca.
-Umenzi we-IPTC / uMbhali usete kwi-iwatermark njengento emiselweyo
-itshintshe indlela yokuziphatha yokufaka ii-watermark ezikhethiweyo kwiifotoNotary
--- Ukuziphatha okudala: layisha zonke ezikhethiweyo njenge-wat Merark enye
--- Ukuziphatha okutsha: layisha yonke i-watermark ekhethiweyo enye emva kwenye ngaphandle kokuba iqhosha lokukhetha licinyiwe emva koko badityaniswe kwaye balayishwe.
-I-bug esisigxina ekukhetheni ii-watermark ezininzi. Ngamanye amaxesha igrafikhi ayizukongezwa xa ii-watermark ezininzi zikhethiwe.
-Ukulungiswa kwe-bug / inqaku: Ukuphuculwa kokuphathwa kwemizobo emininzi / ikhowudi ye-QR / utyikityo olusetyenzisiweyo kwakanye.
iindawo ezihlaziyiweyo ze-ui
-ihlaziywe yaphuculwa incwadi leyo.
-ngezelelwe inkxaso yelayisensi yendawo
- Isampula entsha I-Applescript yokwenza ezimbini ubungakanani bomfanekiso omnye ubukeleyo kwaye ungabinjalo. Iappscriptts zonke zidityaniswe kwi 'iWatermarkApplescrpts.zip' ifayile efumaneka kwicandelo le-apile lencwadi yemigaqo.
-ongeze "uStegomark Viewer" kwimenyu yeFayile. Ixhasa ukutsala kunye nokulahla okanye ukukhetha ifayile ukujonga isicatshulwa kwimifanekiso yeStegomarked. Kubandakanya ukutsala imifanekiso kwiibrawuza. Funda umxholo ofihliweyo xa kukho okuthile.
-yongezwa ngakumbi kwinkxaso yemigangatho yefonti kunye nemenyu yefonti
-Ukutshintsha kombala okumiselweyo kunye nephaneli yefonti xa usebenzisa iifonti ozithandayo
-Ingqushu engalunganga xa uhlela into ngaphandle kombala wesithunzi
- yongeza ikhowudi yokubonelela ngokhuseleko ukuvumela i-watermark graphic graphic kwi-hard drive yangaphandle ngaphandle komfanekiso womfanekiso.
- Imizobo yokuhlela i-UI ehlaziyiweyo yeGrafikhi Knockout White ngoku bonisa umyalezo kwaye ubuyela umva kuValiwe, ukuba imizobo sele ineAlfa okanye iMaski enxulumene nayo.
-isuse ikhowudi ekhangelwe "umendo" womzobo ukhona. Ayisafuneki ngotshintsho lwekhowudi yendawo yokugcina
-Lungiswe: khupha ngokusebenzisa uStegoMark xa kukhethwe ii-watermark ezininzi.
Ukucocwa kwengxelo yelog eyongezelelweyo, kunye nolwazi olungenisiweyo lufakiwe
Ulungiso: ayisiyi-watermarking kunye nokukhethwa kwe-stegomark kusilele. Akufanele uyongeze.
-B ban watermark ngoku baneziphumo.
-Ukuphuculwa: Isiphumo sombhalo Isicatshulwa ngoku sinokulungisa umbala kunye nobubanzi bolwandlalo. Okungagqibekanga kusetelwe kububanzi beepikseli ezi-2, kunye noMhlophe. Kwimenyu yeziphumo unokuseta ezi paramitha. Ububanzi be-1 ukuya kwi-50 pixels. Cwangcisa imibala ku: Bomvu, Luhlaza, Luhlaza, Mthubi, Mnyama, Mhlophe
I-V2.0.10 xa usebenzisa i-% ivumele naphina, iiphikseli-75 ukuya kwi-95 iiphikseli ukusuka kumda okhethiweyo.
-mpazamo engasasebenziyo ye-Appelscript ekukhetheni i-watermark engalunganga (enkosi XYX ngengxelo).
-Hlela uhlengahlengiso lwe-max lweePikseli ukuze ubungakanani kwakhona ubungakanani max okanye 600 Pixel.
Qaphela: Ukuphinda ubeke ubungakanani kwakhona xa umhleli uvuliwe, vala, ulungelelanise ubungakanani uze uvule kwakhona ukuze uhlaziye. ukucaphukisa okungathethekiyo kusekho% uluhlu kuse-75% ukuya kwi-95%
-Iinkumbulo ezincinci ezivuza.
-Lungisa umboniso womfanekiso kuqala kwi-Graphic UI ukukala ngokuchanekileyo.
-lunye uhlengahlengiso lolwakhiwo ngokuthembekileyo kunye neWatermark Pro yeWindows V3.0.9 Beta.
-Izongezo ezisetyenziswa rhoqo ukumisela ubungakanani bemenyu yetemplate ibandakanya iimenyu ezingezantsi ngeendlela
I-Demo eDibeneyo ye-7 ihlala ihleli kwakhona kwi-75% nasemva kokuhlela. Phambi kwale nguqulo inokucima ukukala ihleliwe.
-Coca zonke iidermark zedemo (susa imbonakalo kunye neesampulu ze-HTML njengoko ziphinde zenziwa ngokutsha ukuba zithengisiwe kwelinye ilizwe) kwaye uphucule kwifomathi yangoku kunye nokungagqibeki.
-Ingxaki yokulungisa bug ibiyikhowudi yokulungisa imeko esele ishiywe inikwe amandla, zikhokelela ekubeni yonke i-watermark yokubhaliweyo ifakwe.
-Ifakelwe iithegi ezintsha ezilahlekileyo kwimenyu yokufaka yeGPS.
-Umxholo wesakhiwo osisiseko.
-[[ongeze] iinguqulelo ezimbini ezintsha zeGPS Tag ye-6 echanekileyo: Latitude6, Latitude Deg MM ss6, Longitude6 kunye ne-Longitude Deg MM ss6.
-[ihleliwe] Xa i-mIPTCembeded ikhethiwe kwaye ayigcini i-metadata ayiyi KUGCINAProfayileName, ii-Orientations, kunye neModeli yeMibala.
Idilesi ye-EXIF ekhoyo kunye ne-IPTC ye-Meta ayikopiswanga xa kukhethwa imethadatha kwaye awuzange ushumeke i-IPTC.
- [zihlaziyiwe] amakhonkco kwimenyu yoNcedo kwii-IOS zangoku kunye nezicelo ze-Android.
-Ukuguqula usuka kwi-TIFF uye kwi-TIFF ngaphandle kweAlfa kudala umjelo we-Alpha ongafunekiyo.
Idatha ye-IPTC ayixhasi i-tag ezifana .
-Ukutshintsha kobhalo xa usebenzisa iziphumo.
-Efakelwe inkxaso esisiseko yokufunda .iifayile kwi-os X 10.13 okanye kamva (nantoni na enokuphononongwa kwangaphambili inokufunda).
-Ibug eguquliweyo: Isithsaba sokuhambisa esingekaskroleki ekuqaleni.
- Guqula iKhowudi yeQR ukuzoba umbala ongemva emva kweKhowudi yeQR. Olutshintsho lwaluza kuthelekisa nohlobo lweWindows v3.0.7 yeWatermark.
-Ibug elungiswe kakuhle: Ukubhangqa umbhalo kwiWatermark yokubhaliweyo akusebenzi.
-Ufakelwe i-UI yokuseta ububanzi be-Vector yokubetha.
-Ibug elungisiweyo: Umhleli Wombhalo: ngoku esetyenzisiweyo faka iqhosha lomgca omtsha ngokungagqibeki kwaye ugcine indawo yokufaka xa ufaka iithegi.
-Balungisa ubume bokuhlela umhleli we-UI kunye nemiba yopelo.
-Ufakelwe i-UI ngeenkcukacha zomda weGrafikhi. Ukuseta iRadius kunye noBorder ububanzi ngeenxa zonke zemizobo.
-Ibug elungisiweyo: kwisicatshulwa esitsha sesibhengezo sewatchark ukuba isiseko singakhange siqwalaselwe indlela isibhengezo esimhlophe ngokucacileyo? Ukungagqibeki ukuya kuma kwiipesenti ezingama-45.
-I tag engasasebenziyo:
- Inkxaso eyongeziweyo ekufakweni kwezinye iithegi (amaNqaku, Ulwazi ngeFayile, i-ExIF, i-TIFF, i-GEO, njl.njl. kwisaziso seLungelo lokushicilela.
-Ikhowudi eyongeziweyo yokucoca ii-watermark zelifa xa uzithumela kwelinye ilizwe ukuze zihambisane ngakumbi nohlobo lweWindows.
(Ngaphambili v1.02 yenguqulo yeewindows ibandakanya inqanaba eliphezulu kwinto
-Esuswe "imowudi" yesitshixo selifa
- Indawo eyongeziweyo ngaphandle kokuba ayichazwa njenge%.
-Imilwelwe emiselweyo yelifa xa iphinda ithumele ngaphandle ukuze ibe ne-OffsetX kunye ne-OffsetY njengamanani apheleleyo. Abanye basebenzisela ukukhuphela ngaphandle njengeZintambo.
-Imeko yokubhaliweyo ekusetyenzwa ngayo / umxholo wokuchonga unezibhengezo ezileleyo.
- Umbala oguqulweyo ongasemva wombala webhena kwisimhlophe nge .25 Opacity.
-Umzobo oMiselweyo woHlobo kunye nokuxhoma
-Ubhalo lwe-Arc oluFihliweyo, ukhetho olukhutshelweyo.
-Ubume besimo esicwangcisiweyo kunye nokutsala kunye neeFrames.
- Yongeza into entsha yeewindows "Umphathi weWatermark" ukubonisa / ukufihla ukuzoba (Shift-CMD-M).
-Ufakelwe i-padding w slider kwi-Border yeefestile ezityhutyhayo ukuvumela ukutshintsha kwesakhelo ngasinye kunye nokutsala.
-Ifakelwe iithegi ezintsha , Ukudibanisa iWindows version 3.0.7
-Guqula utshintsho lwe-TIFF ukusebenzisa uxinzelelo lwe-LZW endaweni ye-NONE. Oku kukwenza ukuba usebenzise umda we-2GB kwifomathi yeTIFF ukuvumela imifanekiso enkulu ye-TIFF.
Qaphela: UI etshintshiwe ukongeza ukhetho ukunyanzela imhlophe kwi-QR Code yendlela yokuziphatha endala.
-Ukulungiswa kwe-bug: Umhleli nge-QRCode, utyikityo lomthwalo wegraphic bit, awuzange ukhutshwe ukuze umhleli olandelayo abe ne-phantom graphic.
-Ukulungiswa kweBug: Kugqityiwe kwaye kukrotyelwe ukusebenza ngoku ngee-watermark.
-Ukulungiswa kweBug: Imifanekiso ibingalayishi kwindlela yediski. Ukutshintsha umfanekiso.
- Ukulungiswa kweBug: I-StegoMark nge Ithegi ayisebenzi Akukho zingena ndawo nge unyaka wenziwe. njengemibhalo yeTerms yeWitermark.
* Ukuziphatha kutshintshiwe nceda uphonononge ii-watermark zakho zeKhowudi ye-QR: "yenza i-Transparent emhlophe" ukuba iyasilela, kusetyenziswa umfanekiso wokuqala, endaweni yomfanekiso.
* Ikhowudi yeQR ifuna iMacOS 10.9 okanye kamva.
* Utshintshe ingxelo xa ifomathi yokukhupha ingelilo iJPG ye-Stegomark ku:
Msgstr "" "Impazamo engalunganga yohlobo olukhutshwayo, yitshintshe uhlobo lwefayile yokukhuphela kwiJPEG ukuze isebenze neStegoMark. kwaye udlale "Beep";
* Oonobumba abakhethekileyo okt. ii-non-ASCII azixhaswanga eStegomark.
(Ikhowudi eyongeziweyo yokuguqula: © ™ kwaye • ku: (c), TM, kunye *).
* Umcimbi: Isibhengezo esime nkqo asisongelanga umbhalo ukuba akukho lungisa. Ukutyibilika kuya kusonga. Umsebenzi: Ngena kumgca omtsha.
Ukukhutshwa kokuqala kweWatermark Pro 2.0. Olu luluhlu lwazo zonke izinto ezibaluleke kakhulu ukusuka ku-1.0 kuye ku-2.0
-Iimpawu ezihlaziyiweyo kumhleli weSicatshulwa seWatermark seGPS (iAlt. Intetho kunye neLat.) Kunye Okwangoku (umhla, ixesha, unyaka, itotali) kunye neGalelo leFayile.
-Ukujikeleza okusebenzayo kunye nokukala intshukumo kwiteksti, umzobo kunye neeVal njalo zeVermark. Kwaye i-Smart Zoom yokuvula ukukala / ukuvala.
-Kwenziwe ukuKhangela okuKhawulezayo ukujonga kuqala ukujonga ulwandiso ngokuchanekileyo. okt. Nyanzela Cofa kunye nempendulo zekaptic.
-Umiselo oluhleliweyo lokucwangciswa komlawuli weWatermark ICON ikholamu.
-Ikhawuntari enikwe amandla kwiReame Tab ngalo lonke ixesha, kuba ikwasebenzisa nakwiMata datha yeTaxi.
-Umhleli Wombhalo osisigxina Imenyu yokufaka ithegi yayilahlekile
-Iimpawu ezongeziweyo zeNyanga yokuYila, uSuku lweNdalo kunye nenyanga # # kunye noMhla # #.
Ngomhla wendalo yomfanekiso:
ukuvumela ..ukuvelisa i-2017.03.10 kwiimpawu zetekisi.
-Izongezo ezigqityiweyo zombhalo
-Iinguqu ezininzi ze-ui
Iiwindows ezintsha ezongeziweyo ukusuka kuhlobo lwe-1.0, Imigca, umda, isicatshulwa kwiArc kunye nesibhengezo sombhalo
-Umhleli wombhalo ohleliweyo wombala wangoku kunye nokucima i-Dropshadow.
-I-watermark eyongeziweyo engasemva yeOnOff-boolean yokulandelela ukuba i-alpha yiZero (off).
-Ikhawuntari enikwe amandla kwiReame Tab ngalo lonke ixesha, kuba ikwasetyenziswa kwiMeta datha yeTig.
-Ithegi eyongeisiweyo yenombolo ezi-7 ',' 'Nika ukuchaneka kwamanani ama-3.
-Iimpawu ezihlaziyiweyo kumhleli weSicatshulwa seWatermark seGPS (iAlt. Intetho kunye neLat.) Kunye Okwangoku (umhla, ixesha, unyaka, inani lilonke) kunye neGalelo leFayile
-Ukujikeleza okusebenzayo kunye nokukala intshukumo kwiteksti, umzobo kunye neeVal njalo zeVermark. Kwaye i-Smart Zoom yokucinezela ukukhulisa / ukucima.
-Umhleli: Intsebenzo: Ukwenza i-caching esebenzayo yomfanekiso ongumhleli kumhleli wokuphinda ubekho ngokukhawuleza. Eyona iphawuleka xa imithombo inkulu yomfanekiso weRAW.
-Zilungisiwe kwaye ibugs zilungisiwe
Uhlobo lwe2.0.0 fc42017-07-25
- i-watermark edit iwindows ngoku hlala ngaphambili.
-Ukungaguquki kombala wombala kumnyama kumhleli we-watermark.
- Umbhalo osisigxina we-Emboss / ofakelweyo (okwenzekileyo okhubazekileyo ku-V2.00fc3).
-Ukuvumela i-Arc Isicatshulwa kunye neBanner Watermark Iimpawu ze-Emboss / Imibhalo ebhaliweyo ye-bugs / imiba ye-UI nge-Emboss kunye ne-Engraved:
----- Umva okhethiweyo kunye nomva wokutshixwa
----- Umbala wombhalo awunasiphumo kufuneka ufihlwe okanye ukhubazeke.
----- kufuneka isetelwe kuCinywe (okt.Alpha = 0.0)
----- umbala ongasemva kufuneka ucinywe kubo bonke abakhutshelweyo kunye ne-emboss
----- imvelaphi ayinakuba luqinile okanye ayinakubona isicatshulwa.
----- Umbhalo obhaliweyo / okroliweyo kunye neArc Text Watermark azixhaswa kwiWatch Watermark.
Uhlobo lwe2.0.0 fc32017-06-30
-Ukutshintsha okungakumbi kwe-ui
-inguqu ezininzi kunye nolungiso oluninzi.
-Siziqokelela zonke iinowuthi kwaye sizakuthumela ezinye iinkcukacha apha.
-sicela usinike ingxelo yakho kolu hlaziyo luphambili.
UBALULEKILE: Le nguqulo kunye neenguqulelo ezizayo kufuneka zikhutshelwe ngesandla ngenxa yeenguqu ezenziwe ngu-Apple kukhuseleko. I-https: //plumamazing.com/bin/iwatermarkpro/iwatermarkpro.zip 'Jonga iziHlaziyo' ngoku isebenza ngokwahlukileyo. Khuphela uhlaziyo ngesandla, cima uguqulelo oludala kwaye ubeke ingxelo entsha kwifolda yesicelo.
-Ufakelo olulungisiweyo lokufaka "i-Len" idatha ye-meta (Ulwazi lukaLen, Imodeli yeLen, i-Len ID) kumhleli. Yayifaka uLen Model endaweni yoko
-I-UI ehlaziyiweyo yokuvumelanisa imbonakalo xa umsebenzisi esusa zonke izinto zokufaka
-nokuvumelanisa imbonakalo yangaphambili xa ujika umfanekiso kwisitshixo seWatch Melika.
-Igama elihlaziyiweyo xa usebenzisa "umfanekiso woVavanyo olusisiseko".
-Ingozi ehleliweyo ngo-10.7 xa unika amandla amandla eSepia okanye eGryscale. Oku kubangelwe kukhetho lwe-AutoCoration alukho de kube nge-10.8.x. Babeseti xa kukhethwe u-Sepia no Greyscale. Zifihlwe ngoku kwi-10.7.x.
-isusiweyo isikhokelo esibuhlungu (asisebenzi okwangoku ngenxa yeinguqu zebhokisi yesanti ngu-Apple)
-Uhlaziyo oluhlaziyiweyo lokujonga ulwazi malunga nolwangaphambili
-Lungiswa i-pixel eyi-1 kumcimbi wokulungelelanisa isandla sasekunene okanye phezulu.
-coca umyalezo othile wokungena kunye nokuphuculwa kwegama lokungena kwimicimbi yoyilo.
-utshintsho lokhetho lokutshintsha ukukhupha i-zip ukuze usebenze ujikeleze imiba yesanti.
-Funa i-OS X 10.7 okanye kamva kwi-PhotoNotary. Ke, kwi-10.6 PhotoNotary iya kuthi ikhubazeke.
Umcimbi wokusayina ozinzileyo onxulumene nenkxaso ye-10.7, 10.8, 10.9 kunye no-10.10.
- Hambisa i-ps2png ngaphandle kwencwadi yolwazi, njengoko icetyiswe nguApple.
- ukucoceka kwekhowudi encinci
KUBALULEKILE: Le nguqulo kunye neenguqulelo ezizayo kufuneka zikhutshelwe ngesandla ngenxa yotshintsho olwenziwe ngu-Apple kukhuseleko. I-https: //plumamazing.com/bin/iwatermarkpro/iwatermarkpro.zip Iqhelekileyo 'Jonga iziHlaziyo' ayisasebenzi ngendlela efanayo. Uhlaziyo luya kufuneka lukhutshelwe ngesandla kuzo zonke iinguqulelo ezintsha.
-tshintsha iindlela zokuhlaziya ukuze ukhuphele zip ukuze usebenze ujikeleze imiba yesanti.
-Ukutshintshwa kweskena kwifolda yokufaka ukuze kulungiswe umbandela wokufa ongakwicala lomthi kwimithi yeefolda ezinkulu kwikhowudi yelifa le-Apple. Kubonakala ngathi inxulumene no-10.10.2 uhlaziyo.
-Ikhutshiwe eyakhelwe ngaphakathi ukukhuphela kunye nokufaka ii-plugs ze-iPhoto kunye neAperture, azisebenzi kuPhoto lwe-Apple App oluku-OS X 10.10.3 olukhoyo ngo-Epreli. Iifoto zika-Apple's zithathe indawo ye-iPhoto kunye neApile. Isifaki esikhutshiweyo siya kuqhubeka ukubakho kwincwadana yolwazi kwabo bafuna ukuyisebenzisa. Iinkcukacha ezithe kratya koku kule ncwadana yemigaqo.
-Umcimbi osisigxina PhotoNotary show non
Ifolda yWatermark "kwiiAlbum zam".
Ikhowudi esisigxina yokudala ikhonkco kwifolda yemifanekiso kwiWatermarkcript folda yokufikelela ngokulula.
-Imenyu eqokelelweyo yesiScript sokufaka impazamo xa usenza ikhonkco ukusuka kufolda yomntu ukuya kwifolda eskrinini
-Imenyu eqokelelweyo yeScript, ukuvuselela emva kokugcina useto olutsha kwifolda yencwadi "com.plumamazing.iwatermarkpro".
-Ucwangciso lokulondolozwa olusisigxina njenge-AppleScript, ke ifolda yokufaka ayisetiwanga, kuyavakaliswa ukuba isikripthi siqhutywa.
-Ukutshintsha okungagqibekanga kokufakwa kwakhona ku "kuqalo", engacacanga kuqalo (isakhelo esikhethiweyo),
- Susa ikhowudi yefa ebangele ukuba iifayile zamangenelo zifakwe ngo-10.10.2.
-Ukususwa kwendalo kweDroplet ngenxa yeemfuno ezintsha zokhuseleko ze-10.9.5 kunye ne-10.10.x
-Idilesi yokhetho elitsha eyongezwa ngokutsha. Ukuseta ukuqala kwexabiso lekhawuntara. Ukungagqibeki ngu-1.
-Iikopi ezintsha zeSampula yokuhamba komsebenzi wokugqibela (jonga amakhonkco kwi-Manual).
-Iinketho zokongeza ezibukhali zokufaka isicelo sefayile.
-Iikhetho ezongeziweyo zoLungelelwaniso oluzenzekelayo ukufaka iifayile zokukhupha. (okwangoku nayiphi na = iphela okanye icinyiwe
-uya kulungisa ukukhutshwa okulandelayo).
-Idityaniswe nge-sepia kunye ne-BW / isikali seGrey kwiinguqulelo zemveliso kwiNkqutyana
-i-folda ebizwa ngokuba yi-sepia kunye ne-BW ngokulandelelana
-Ifomathi yeTabhule yoKwandiswa kwefomathi yoPhumo kunye nezixhasi
-Utshintsho lwe-UI: Inketho yokongeza igama elitsha. Ukuseta ukuqala kwexabiso lekhawuntara. Ukungagqibeki ngu-1.
-Utshintsho lwe-UI: Iphepha leMetata elihanjisiweyo "Khuphela umhla wokuyila" kwiphepha leReame.
-Utshintsho lwe-UI: Ifomathi yefayile yokuHamba kwiFomathiyibhile ukusuka kwiRebhu yeRefault
-Utshintsho lwe-UI: Isiseko seTab ephambili, iSakhelo seFolda kwi-Tab yeMveliso
[Ilungiselelwe] Ikhuphe imiyalezo eyongezelelweyo yeLog kwiV1.54r2 okt. ZOBHALA: ubudala [uLungisiwe] Xa uqalisa ukuqhubekeka, ukhupha umyalezo ogqityiweyo. okt. "Inkqubo egqityiweyo". [Imodyuli] Ukucokiswa: Demo
- Isiseko sempunga ye-Watermark me.wmk4
-iteksti esecaleni ngezantsi nge-1% kwaye yongeza indawo ekugqibeleni [uFixed] suala nge-OS X 10.6.8 engajongi ii-watermark zombhalo. [Fixed] preview for Blend Modes [Mod] Xa iZicelo zethu zeSkiyo azikho okt. "~ / Ithala leencwadi / Iincwadi zesicelo / com.plumamazing.iwatermarkpro" ayikho kwaye asinakwenza nto Sibonisa isikhombisi somzali ngoku: "Izikripti zoSetyenziso" kunye nomsebenzisi olumkisayo ukuba enze ngesandla isikhombisi: "com.plumamazing.iwatermarkpro" Imodeli] Inguqulelo ekhawulezileyo yeLook # ukusuka kwi-v1.51 ukuya kwi-V1.54 (siyilibele ukuvuselela).
[Iphuculwe] Iinguqu ze-UI kumphathi we-watermark 1. ngoku, khangela phezulu, 2. ukuphinda igama igama longezwe, 3. ukulungiswa okungapheliyo ngumhla omfutshane ukusuka kumhla omde ngaphambili. 3. cofa kabini kwi-watermark ukuze uhlele. cofa kabini kusetyenziswa ukuvumela ukuphinda unike igama.
[Umhleli osisigxina] ngoku ulungisa ukuhlela kwangoku ngaphambi kokugcina.
[Zilungisiwe] iinkcukacha zento ziphuculwe. ngoku ingxelo # yento ayikho into ecinywayo kwaye ubonise umbhalo wento ekhethiweyo
[Yongezwa] ii-watermark ezintsha ezingama-23 ezongezwe kwisimo esingasasebenziyo se-app. Babonisa ezahlukeneyo. Zonke ezi ziya kulayisha okokuqala kubasebenzisi. Abasebenzisi bangaphambili ukuze babalayishe nokuba: 1. khetha ukuseta okungasasebenziyo kwi-Advanced tab okanye ku-2 ukhuphele kwiwebhusayithi: https://plumamazing.com/bin/iwatermarkpro/Defaultwatermark.zip ezi watermark zibonisa indlela yokusebenzisa imethadatha njenge-watermark, ukusetyenziswa kwegraphic. Ukukhetha, ukusebenzisa ubungakanani kunye nezixhobo zendawo, ukusetyenziswa kwedatha yencwadi yedilesi, iziphumo ezizodwa, njl.
[Ilungisiwe] ukubuyisela iwebhusayithi yeCreative commons xa usetyenziso luhamba.
[Iphuculwe] iinguqu ezincinci ze-ui ezincinci ukuphucula ukusetyenziswa ngokulula.
[Iphuculwe] umphathi we-watermark ui. yenza i-IPTC / XMP intsimi yesi-2 ukuvumela ukubonakalisa xa i-watermark ingene kwi-IPTC / XMP info. ukufakwa kwenziwa kwimenyu yegiya ngezantsi kwewatermark mananger. Sebenzisa into yemenyu 'Shumeka i-IPTC / XMP kwi-watermark ekhethiweyo'. ke, ngoku i-watermark inokongeza i-watermark ebonakalayo kwaye kwangaxeshanye yongeze i-IPTC / XMP metadata kwifoto nganye.
1.51 Inguqulelo eguqulweyo
[Ongeze] iWatermark ngoku iyasebenza. Imenyu yezibhalo ezongeziweyo yongezwa. Oku kuvumela ukugcwala komsebenzi okuphezulu ukuba kwenziwe. Ukufikelela ngokupheleleyo nge-AppleScript kuzo zonke iisetingi kunye nezinye iimpawu eziluncedo: * Uluhlu lwee-watermark, ii-watermark ezikhethiweyo (rw) * # yomfanekiso ofunyenweyo * isalathiso somfanekiso wangoku (rW) * uluhlu lwendlela eziya kwimifanekiso efunyenweyo. * Inqanaba lwenkqubo yangoku (r) * -myalelo wokuqalisa ukuqhubekekisa, konga ifolda yokufaka.
[Etshintshiwe] Ukujikeleza okungaguqukiyo kunye nenqanaba lokuxhasa ngenkxaso.
[Yongezwa] I-sandboxing yenziwe ukuba isebenze.
[Ongeze] I-App isayinwe kwaye idityaniswe ngeXCode yakutshanje. Ikhowudi yenziwe
[Engeziwe] Iitermark ezikhutshelweyo ezivela kwi-Mac ngoku zisebenza kwiWindows nakwelinye icala.
[Yongezwe] OS X 10.8 Ukwabelana ngeendlela zokhetho-i-AirDrop, i-Flickr, i-Twitter, i-Face Book, njl.
[Ongezwe] Ukufikelela kwi-iWatermark yeefonti ze-iOS zokungqinelana. Vula kuPhambili: Ukwabelana ngethebhu.
[Yongezwe] Imodeli emitsha yoSasazo (ingqokelela emhlophe) kunye (noqokelelo lwabantsundu).
[Etshintshwe] umatshini wokuguqula iithayile ngoku kudala isakhiwo sombhalo esisezantsi (okt. Kuhlonipha useto lwefolda).
[Kutshintshiwe] Umda wokuphulukana ukuya kwi-25% yomfanekiso ukuvumela i-watermark ibekwe inxenye yomfanekiso.
[Ivuselelwe] I-Dropbox kwi-V1 API, kwaye yenza lonke uqhagamshelo lusebenzise uqhagamshelo olufihliweyo (https: //).
[Ihlaziywe] iplagi ekhawulezayo yeeLatermark ezihlaziyiweyo kwaye ziphuculwe.
[Ukucoca] Imifanekiso yethala leencwadi yeGrafikhi enikwe igama kwakhona kwaye yalungelelaniswa. Amaphepha atshintshelwe kwi- "Artwork Library" kwaye ongeze iigrafikhi ezintsha.
[UI Uhlaziyo] Mhleli, Imenyu yokutshintsha eguquliweyo ukubandakanya iinketho zedilesi.
[UI Uhlaziyo] Ukujonga kwangaphambili komhleli kumhleli akusafuneki ukugcinwa kwe-watermark yangoku.
[Engeziwe] khetha zonke izinto ze-watermark ezongezwe kwimenyu yokujonga.
[Silungisiwe] "bonisa ii-Object handles" ngoku zihlaziyayo emva kotshintsho.
[Fixed] Utyala umhleli-Ulungiso.
[Ongeze] inkxaso yokugcina ku ".iwmkMetaSet" ulwandiso lwefayile yesiqhelo kunye nokucofa kabini kuya kulayisha idatha ye-iptc / xmp meta.
[Ongeze] inkxaso yenkxaso yeqonga lomnqamlezo kwiifayile zamatikiti (.wmk) ezikhutshelwa ngaphandle zibandakanya "rtf" kunye "html" yinguqulelo yeeWatermark ezombhalo.
[Etshintshiwe] Guqula umzobo ukuvumela imifanekiso png okanye imifanekiso yePSD.
[Ongeze] ukhetho lokukhetha (Ibhokisi yokulungiselela (okona nobubanzi nobude), ubude obufanelekileyo, Ububanzi obufanelekileyo
[Engeziwe] Inkxaso eyongeziweyo% yeesayizi yangoku zokuphinda ubenamandla.
[Etshintshiwe] phinda ubeke ubungakanani bemenyu esekwe kuqala "kwenye" ​​xa umsebenzisi etshintsha abe yi-% okanye ahlele ububanzi ukuya kubude.
[Engeziwe] Yenza imbonakalo kuqala kuMphathi weWatermark ngolwazi lwetekhnoloji.
[Ongeze] imigca yokubeka kwezinto zencoko yendawo yongeziwe.
[Engeziwe] Ukwabelana-kwenza kwalula ukwabelana nekhonkco kwifolda yakho yeWermark kwiDropbox.
[Engeziwe] Inkxaso yomoya wokuhamba ngokwabelana ngewatermark phakathi kwekhompyuter iMacintosh eqhuba i-10.7 okanye i-10.8. I-10.8 efunekayo ukuthumela, i-10.7 okanye kamva ukufumana kumfumani, emva koko ingenise kwi-iWatermark.
[Ongeze] Guqula i-preview yefestile yokuqala ngomyalelo p kunye ne -hift-command-space space.
[Yongezwe] Inkqubela phambili yebhokisi yokukhangela ye-JPG kwithebhu enokhetho lweJPEG. Sisuse kwi-Advanced Advanced Tab.
[Engeziwe] Ukhetho olukongezwa kuMphathi weWatermark ukuze ushumeke i-IPTC / XMP kwii-watermark
[Ongeze] Yenza iiWatchark ezithunyelwayo kuMphathi weWatermark-> Imenyu yokwabelana (Ukuhla komoya, i-imeyile, iMessenges (iChat), ibhokisi eyehlayo).
[Itshintshiwe] Ngoku ikhubazekile / yenza ukuba imenyu isekwe kwiDropbox yokungena.
[Etshintshileweyo] Ukutshintsha ubungakanani be template yemenyu (ukuseta ngesihloko, i-iOS, iiMonitha, ikhamera njl.njl).
[Yongezwe] Uninzi oluncinci olwenziwayo, ukulungiswa kunye nokutshintsha kwe-ui kukhulu kakhulu ukuba kungabhalwa apha.
I-iWatermark Pro Manual
Iinguqulelo zangaphambili zeWatermark zeMac kunye neeWindows
OS kunye noQhagamshelo loLwazi
Iinguqulelo zamvanje zeWatermark zeMac, iOS, Win kunye ne-Android
Amakhonkco oguqulelo ngalunye, ulwazi, i-OS, ukhuphelo kunye nencwadana yemigaqo
Igama kunye nolwazi olungaphezulu
IMac iWatermark IMac 10.9-12.0 + umxokozelo 2.6.3 ikhonkco
iWatermark Pro 2 7, 8.1 okanye 10
64 bit, 10, 11 umxokozelo
Zingaphi iinguqulelo ze-OS ezixhaswayo ngokwasetyenziswayo?
Uhlaziyo olukhulu luya kuhlala luxhasa ubuncinci iinguqulelo ezikhoyo kunye nezangaphambili ze-OS kwi-Mac, Windows, iOS kunye ne-Android.
Sinqwenela ukubanakho ukubonelela ngenkxaso kwinguqulelo ezindala ze-OS nganye kodwa oku akusoloko kunokwenzeka kwaye ngamanye amaxesha kunokusithintela ekubeni sikwazi ukuthatha ithuba lokuphuculwa kwenkqubo yokusebenza.
Siyaqhubeka nokuzama kwaye sinikezela ngeenguqulelo ezindala zesoftware yethu kwiinguqulelo zakudala zeenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza. Thepha apha kwiinguqulelo ezindala kwiMac naseWindows
Scott Baldwin -Scottbaldwinphotography.com
"Inye into endiyithandayo ngemveliso yakho kukuba ukubekwa kwe-watermark kusekwe kwipesenti yemifanekiso, hayi inani elithile leepikseli. I-Whey ibalulekile? Ndidubula ngekhamera ye-24.5MP kunye neekhamera ezili-12MP. Ndifuna i-watermark yam ikufutshane emazantsi emifanekiso kunye nezinye iimveliso ekufuneka ndibaxelele ukuba zingaphi iipikseli .. Ukuba ndisebenza ngomfanekiso we-24.5MP inani leepikseli ndifuna umfanekiso ukude nezantsi uza kwahluka xa kuthelekiswa Kwifoto engu-12MP. Usebenzisa i% ubungakanani. Ndiyakwazi ukukuqhuba ungene kwiifoto ezimbini ezahlukileyo kunye nokubekwa kwelogo kuya kuhlala kufana. Ndicinga ukuba yinto elungileyo leyo.
UDiane Edmonds - -IWavePics.com yakho
Njengomntu othatha iifoto zomzabalazo ozama ukwenza ukuba iifoto zam zipapashwe, iWatermark iye yeyona $ 20 ebalaseleyo endikhe ndayisebenzisa! Wonke umntu ufuna ukuba uthumele iifoto nge-imeyile kodwa ibilixesha elininzi lokongeza ii-watermark ngesandla ukuze zihlengahlengise nkqo kwaye zithe tye Ndizamile ukusebenzisa i-Photoshop Elements batch process. Kuyinkimbinkimbi kakhulu ukuyenza kwiPS5. Le nkqubo indisindise ixesha elininzi lokujonga ngokukhawuleza ifolda yeefoto kwaye ndiyithumele kubapapashi abahlukeneyo. "
UPeter Kearns- www.pfphotography.com.uk
Chris-Ifoto yedijithali yentshukumo
Kudala ndisebenzisa iWatermark okwethutyana kwaye ndiyayithanda. Kunyaka ophelileyo ndaye ndaphelelwa yintengiso, ngenxa yokukhuphela iifoto zewallet kwindawo yam. Kulo nyaka ndisebenzisa iWatermark kwaye intengiso yam inyukile. Abantu abafuni ukubona ulwazi malunga nelungelo lokushicilela kanye phakathi komfanekiso. Yimveliso elungileyo, ixabiso elikhulu kwaye elona lilungele ukusebenziseka lula. Enkosi ngokundinceda ukukhusela imveliso yam! Uxolo. "
UJon WrightJ&K ndiyile! - http://www.artbyjon.com
“Inkqubo yakho ibe luncedo oluhle kum. Ndihlala ndibeka umtshato wam, umsitho kunye nokufota ngemifanekiso kwiitikopix.com. Kuyanceda ukumisa ukusetyenziswa okungagunyaziswanga komsebenzi wethu kwaye ndiqinisekile ndiyabulela ngaloo nto. Sakuvuyela ukubhatala le nkqubo. ”
"Ndidwelisa izindlu kwi-craigslist yerente kwaye ndafumana ezinye zeepuzzle zam ngaphambi kokuba ndithenge i-iWatermark. Ngoku abarhwaphilizi bakhetha enye into ekujoliswe kuyo kuba indawo yam yewebhu ibekwe kwifoto!"
Beka isikhombisi semouse ngaphezulu kwesilayidi ukuze ume.
Uphengululo lweMac Informer 6/3/2021
Isoftware egqwesileyo yokubonisa iifoto 2020
Isoftware ephezulu ye-10 yokuKhangela iMifanekiso ngo-2020.
-Uphononongo olwenziwe nguLiza Brown, Filmora 1/15/2020
Ukujongwa kwakhona kweWatermark Pro yeeWindows
Isoftware elungileyo yokujonga amanzi ka-2018
I-iWatermark Pro yeyona software ibunjiweyo ethengisayo endiyiqwalaseleyo, kwaye inamanqaku amaninzi angakhange ndiwafumane kwenye inkqubo. Ngaphandle kokubanako ukuphatha izicatshulwa ezisisiseko zemifanekiso kunye neewatchark zemifanekiso, kukho iqela lezinto ezongezelelekileyo njengeekhowudi zekhowudi ye-QR kunye neewatchark ze-steganographic, ezifihla idatha kwindawo ebonakalayo ukuthintela amasela emifanekiso ukuba angayikhuphi okanye ayigqume iwatermark yakho. Ungadibanisa neakhawunti yeDropbox ukuze ugcine imifanekiso yakho ebonisiweyo, eluncedo kakhulu ekwabelaneni kwabathengi ngokukhawuleza. ”
- UThomas Boldt, IsoftwareHow
Ngaba unemifanekiso? Beka i-Watermark kwi-Bango ngalinye lokuBanga iMalungelo akho
- UJeffrey Mincer, IBohemian Boomer
Uphononongo lweSMMUG lweWatermark Pro
Uphengululo olunzulu ngesiSweden kwiWatermark Pro. - UHenning Wurst Funda yonke ibakala
UChris Dudar, ATPM
UJay Nelson, Macworld
I-4.5 yeempuku ezi-5.
“Ubuhle beWatermark ngumdibaniso wayo wokusebenzisa ngokulula kunye nokusebenza. Ukuba ukhe wafuna ukuzama i-watermarking, okanye ukuba sele uyenzile kwaye uyayamkela indlela yokwenza ngokukhawuleza nangokulula, iWatermark sisixhobo esingabizi kwaye sinomtsalane. Andikasiboni isisombululo esingcono kuneWatermark yeSoftware. ”
-UDan Frakes, iMacworld
-UDaniel M. East, iMagazini yoyilo lweMac, ireyithingi
-UDave Johnson, kwiHlabathi lePC
Funda yonke ibakalaIindaba zeMacsumum uphononongo walunika i-9 kwali-10.
UPhononongo lweHlabathi lwePC
UDiane Edmonds - YakhoWavePics.com
UPeter Kearns - www.cungcoca.co.uk
Chris, Ukusebenza kweDijithali yentshukumo
Inkqubo yakho ibe luncedo nje kum. Ndihlala ndibeka umtshato wam, umsitho kunye neefoto zemifanekiso fespix.com. Kuyanceda ukumisa ukusetyenziswa okungagunyaziswanga komsebenzi wethu kwaye ndiqinisekile ndiyabulela ngaloo nto. Sakuvuyela ukubhatala le nkqubo. ”
UJon Wright, uJ & K woyilo! - http://www.artbyjon.com
"Ndidwelisa izindlu kwi-craigslist yerenti kwaye ndafumana ezinye zeepuzzle zam ezibiweyo Phambi kokuba ndithenge i-iWatermark. Ngoku abakhohlisi bakhetha enye into ekujoliswe kuyo kuba indawo yam yewebhu ibonwe kwifoto!"
Ukusuka MacUpdate -isiza sokukhuphela isoftware yeMac.